TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO : Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina
Nitrangana vono olona tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny fokontany Tsaravanja, kaominina Antetezambaro distrikan’i Toamasina II. 20 janvier 2019
Ny alakamisy 17 janoary lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany hariva no nitrangan’izany. Mponina tao Ankirihiry Toamasina ilay rangahy fa nisafidy ny nanorim-ponenana ao Tsaravanja-Antetezambaro tao anatin’ny taona vitsy izay. Manana tanimboly any mantsy izy ka izao nanapa-kevitra nanorim-ponenana izao. Ny andron’ny alakamisy 27 janoary io, teny an-dalana hamonjy fodiana avy tany an-tanimboliny izy no niharan-doza.
Raha ny fanazavana voaray, dia tamina lalan-kely miala ny tanimboliny no nifanehatra tamina tovolahy antsoina hoe Isala ilay rangahy. Nisy antsy avy nampiasainy tany antsaha teny aminy. Nilaza taminy ilay tovolahy fa « avelao iny antsy am-pelatananao iny fa hiresaka isika ». Tsy nanampo na inona na inona ilay rangahy, ka nametraka ny antsy teny an-tanany. Vantany vao napetrany ilay antsy, dia noraisin’ilay tovolahy ary norarafany totohondry avy hatrany ilay rangahy. Vao 20 taona ity nahavanon-doza ity ka tsy nahatohitra azy ilay rangahy efa 64 taona. Ity farany izay nidaraboka tamin’ny tany.
Taorian’izay dia nampanarahiny tetik’antsy tamin’ny vatan’ilay raim-pianakaviana iray manontolo ka nitarika tamin’ny fahafatesany. Ny antsin’ilay rangahy ihany no namonoan’ity tovolahy azy. Nitsoaka nandositra Isala rehefa vitany ny asa ratsiny. Nisy nahatsirakitra anefa izany, ka natao ny fanenjehana ity nahavanon-doza. Nantsoina ny zandary nanao sakana teo Ivoloina ary natao ny fanarahan-dia. Tsy lasa lavitra dia voasambotra ity olon-dratsy. Raha ny angom-baovao dia mamon-drongony ilay tovolahy.
Tsy nisy disadisa teo aminy sy ilay rangahy tany aloha.
Ny fanadihadiana savaranonando no nahalalana fa efa avy namono olona tany Mahambo Fenoarivo-Atsinanana ihany koa Isala taona vitsivitsy lasa izay. Manara-bady no anton-diany ao Antetezambaro ka izao manohy ny filan-dratsiny izao koa.